XOG:- Mareykanka oo digniin kasoo saaray faragelinta uu Jeneraal Gaafow ku haayo doorashada Cadaado – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Mareykanka oo digniin kasoo saaray faragelinta uu Jeneraal Gaafow ku haayo doorashada Cadaado
War-qoraal ah oo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay u dirtay madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariim Xuseen Guuleed ayaa lagu sheegay in laaluush, musuq-maasuq iyo awood sheegasho loo adeegsaday doorashada ka socota magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Doorashadaasi oo lagu dooranaayo xubnaha Galmudug u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inaysan xalaal ahayn islamarkaana ay ka jirto musuq aad u baahsan iyo hanjabaadyo isdaba joog ah oo lagu haayo qaar ka mid ah musharixiinta tartanka ka qeyb-galeysa.
Sidoo kale, qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka warqabto in taliyaha nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamuud uu ciidankiisa u daabulay xarunta doorashadda ee magaalada Cadaado iyo goobaha loogu tala galay ergooyinka, kadibna uu ciidankiisa ku dalbaday musharixiinta doorashada, si ay uga laabtaan musharaxnimadooda.
Taliye Gaafow ayaa la sheegayaa inuu amar ku bixiyay in lasoo xiro Xasan Madoobe iyo musharax Maxamed Maxamuud Guure, oo haatan ah musharixiin, taas oo la yaab ku noqotay dad badan.
Ugu dambeyntii, qoraalka ayaa lagu sheegay in fara-gelinta Jeneraal Gaafow uu ku haayo doorashadda Galmudug uu ka macaashay walaalkiisa C/qaadir Gaafow Maxamuud, kaas oo kusoo baxay xubnaha xildhibaanada Galmudug u matalaya Aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.